Amaxabiso e-Eskisehir Ankara amaxabiso aphezulu esantya soTikiti kunye neeShedyuli | RayHaber | raillynews
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraEskisehir Ankara High Speed ​​Qeqesha iiShedyuli zeThikethi kunye neShedyuli
12 / 07 / 2019 06 Ankara, 26 Eskisehir, Ummandla waseMntla Anatolia, railway, JIKELELE, ITrove Train, ETURKEY
I-TCDD yeThutho ikuvumela ukuba usebenzise ixesha phakathi kweedolophu ezinezikhulu eziphakamileyo kunye neetoni eziphezulu. I-Eskişehir ne-Ankara, ephakathi kwezi zixeko, basebenzise isitimela esiphezulu kakhulu ngamandla kunye nenyameko, ingakumbi kuba kukho iidolophu ezimbini ezinkulu kwaye zinabantu abaninzi. Ngokukodwa ukuqwalasela umthamo womfundi we-Eskişehir no-Ankara, le nkqubo inomsebenzi kwaye inokugcina ixesha kubafundi. Eskişehir-Ankara High Speed ​​Qeqesha Le ngenye yezimiso kwi-Eskişehir-İstanbul-Ankara Line. Ngokupheleleyo, kunokwenzeka ukuba abagibeli benze iihambo ze-5 kulo mgca. Eskisehir-Ankara High Speed ​​Train line, enye yeenqwelo ze-6, yenza iindiza ze-13 imihla ngemihla. Ukususela ngeli xesha lifutshane, akukho nqola yokutya kuyo. Ekubeni izitishi zesitimela zihlala kwisixeko, eli xesha linika abagibeli ngendlela efanelekileyo. Unokufikelela kalula kwiibhasi zedolophu kunye nokunye. Abagibeli banokudluliselwa kwindawo eya kuyo ngeendlela zokuthutha. Uhambo ludlulisela i-1,5 iiyure.
Zonke iindidi zeemfuno zabagibeli kwisitimela zacatshangelwa kwaye yayijoliswe ekubhenkeleni kuwo wonke umntu aneenqwelo zokuhamba ezinemilinganiselo eyahlukileyo. Uloliwe luquka i-Pulman Business kunye nezihlalo ze-Pulman Economy. Abagibeli banokuthenga amathikithi kwanoma yiluphi uhlobo lwentanethi Inkqubo yokuthenga ithikithi ye-intanethi, yenye yezinto ezinikezelwa ngabagibeli ngeTCDD zothutho, unokhetha uhlobo lwenqwelo yakho kwi-intanethi, qwalasela indawo yakho kwaye uqedele inkqubo yakho yokuthenga ithikithi ngokuhlawula intlawulo yakho yetikiti, kungakhathaliseki ukuba yeyiphi ixesha kunye nendawo.
Zingaphi IiHora Ngee-Speed ​​SpeedQeqesha kwi-Eskişehir ukuya kwi-Ankara?
Isitimela esiphezulu esivela ku-Eskişehir ukuya e-Ankara sithatha ii-1,5 iiyure phakathi kwe-Eskişehir ne-Ankara. Uloliwe luqala uhambo lwawo lokuqala ukusuka e-Eskişehir kwi-06.20 kwaye luqala uhambo lwayo lokugqibela kwi-21.10. Ngezantsi itafile epheleleyo malunga nexesha lokuhamba kwesitimela.
(Kuyasebenza ukusuka kwi08.12.2019)
Hayi Ukusuka e-Eskisehir Polatli UKUFIKELELA Ankara Ukufika ixesha
I-Eskisehir-Ankara High Speed ​​Train Stations
Eskisehir-Ankara High Speed ​​Qeqesha iiTikiti zeThikithi
I-Eskişehir-Ankara iYTT ixabiso leethikithi lihlukaniswe zibe zimbini njengetikiti eziqhelekileyo kunye netikiti eziguquguqukayo. Abagibeli banokuthenga itekiti ukusuka nasiphi na imoto. Ngethuba elifanayo, ngokweminyaka kunye namaqela abasebenza abagibeli, i-TCDD Transportation inikeza izaphulelo kwiitikiti zazo. Abagibeli bahlawula i-43,50 TL ye-Pulman Business kunye ne-30 TL yeTikiti yezoqoqosho yePulman.
I-Eskişehir-Ankara Isantya seThikithi Iitheyiti zeethikithi zithenda ziyahlukahluka ngokweentlobo zeenqwelo ukuba abagibeli bafuna ukuthenga amathikithi kunye namaqela eminyaka kunye nemisebenzi apho badibene khona. Ngokomyinge, iintengo zetikiti ziyahluka phakathi kwe-24 TL kunye ne-50 TL. I-TCDD Abagibeli bezothutho banikezwa amazinga okunciphisa ngokuxhomekeka kwiminyaka yobudala kunye namaqela omsebenzi ngokulinganayo.
Abantu abanelungelo lokukhupha amathikithi anabantwana abaneminyaka ephakathi kwe-0-6, amaqhawe emfazwe kunye nezihlobo zokuqala, abahlali abakhubazeke kakhulu, abagijimi belizwe kunye nezihlobo zedolophu yokuqala.
Abahamba nge-20-abakhutshwayo, abantu abatsha abaneminyaka eyi-13-26, ootitshala abavunywe yi-MoNE (i-univesithi okanye abafundi beekholeji, njl njl.), Abemi be-60-64, amalungu eqela athabatha amathikithi e-press, amalungu e-Armed Forces kunye ne-roundtrip Isebenza kubagibeli abathengisa itikiti zabo ukusuka kwisikhululo esifanayo.
Isilinganiso sokunciphisa i-50 sisebenza kubagibeli, abemi ngaphezu kweminyaka eyi-65, abantwana abaneminyaka eyi-7-12, kunye nabantwana abaneminyaka yobudala be-0-6 ngokucela.
I-Ankara Eskisehir Iishedyuli zeeTrafti eziKhuselekileyo kunye neTekethi zamaxabiso - TRENKART
Amaxabiso eKitiza eKonya Eskisehir
Eskisehir Ankara kwixesha elikhawulezayo
I-Eskisehir-Ankara ixabiso leethikithi zeetikiti eziphakamileyo
Eskişehir-Ankara High Speed ​​Timetable
I-2 Ukulandelela / iingxaki
IXTUMX yamaXesha okuThola okuSantya amaXesha amaXesha kunye namaXesha- RayHaber
Uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu - RayHaber